လေနုအေး: အချစ်နဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း
Posted by တန်ခူး at 1:46 AM
တို့ကတော့ ဦးနှောက်ရော နှလုံးသားရော သင့်သလို ပါသလိုပဲ.. ကံတရားကလည်း ပါတယ်ထင်တာပဲ။ တို့က ကံကြမ္မာကို ယုံကြည်သူများအုပ်စုဝင်လေ.. :)
တိုက်ဆိုက်တာတွေ ကြုံဖူးတာတွေလဲ ပါနေလို့ စဉ်းစားစရာအတွေးတွေ ရသွားတယ်
အိမ်ထောင်တခုမှာ အချစ်ဆိုတာ မရှိမဖြစ်သလို အချစ်တခုတည်းနဲ့လဲ အိမ်ထောင်တခု တည်ဆောက်လို့ မရနိုင်ဘူး ထင်တာပဲ..
သူငယ်ချင်းရဲ့ အစ်မတစ်ယောက်လဲ အဲဒီလူမျိုးပဲ။ သူ့ချစ်သူနဲ့ သူ နှစ်ယောက်လုံး ယူဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်။ ဆရာဝန်တွေမို့ အတင်းယူမယ်ဆို စီးပွားရေးလဲ ပူစရာမလိုဘူး။ သဘောမတူတဲ့အချက်က သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ အယူအရ မိန်းမက ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ထက် အသက်မကြီးရဘူးတဲ့။ ကောင်မလေးက ကောင်လေးထက် နှစ်နှစ်ကြီးနေတော့ အခက်တွေ့ရော။ နောက်ဆုံးတော့လဲ မိဘအသိုင်းအ၀န်းကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး ထင်ပါရဲ့ ကောင်လေးကအရင် အိမ်ကပေးစားတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်သွားတယ်။ အဲဒီအစ်မခမျာ အသည်းကွဲပြီး စလုံးမှာ သူ့မောင်ဆီ အလည်လာ နေသေးတယ်။ သူချက်ကျွေးတဲ့ ပူရီစားပြီး သူ့အသည်းကွဲဇာတ်လမ်းကို ၀မ်းနည်းစွာ နားထောင်လိုက်ရတယ်။
>>>>ကြိုက်သူတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ကြားထဲမှာ သူ့ နှလုံးသားက ဘယ်သူ့ ကိုမှ ချစ်လို့ မရလို့အပျိုကြီးလုပ်နေခဲ့တာတဲ့။ <<<<
တန်ခူးရေ... တန်ခူးသူငယ်ချင်းကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး။
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေ လုပ်နေကြသူတွေထဲမှာ လိင်တူကို စိတ်ဝင်စားသူတွေလည်း ပါဝင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက ခွင့်မပြုတာကြောင့် သူတို့ခမြာ သူတို့စုံမက်သူတွေနဲ့ အတူနေခွင့်မရဘဲ လူပျိုကြီး အပျိုကြီး ဘဝနဲ့ အရိုးထုတ်သွားကြရရှာတာပါ။ တခါတလေကျတော့ အဲသည်အဖြစ်ကို လူသိမခံချင်လို့ ဒီလိုပဲ ကြည့်ကောင်းအောင် လှီးလွှဲပြောရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ....“အပူမရှာချင်လို့ အိမ်ထောင်မပြုတာ” ဆိုတာမျိုးပေါ့။
သူတို့တွေလည်း လူထဲကလူတွေမို့ သူတို့ဘဝကို နားလည်ပေးနိုင်မယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုး အမြန်ဆုံး ပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အ၇မ်းလှတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ အစ်မရေ သဘောကျတယ် ပြီးတော့ မှတ်သားစရာ အချက်လေးတွေ ဗဟုသုတ ရစရာလေးတွေကော အတွေးတွေ အများကြီးပေးသွားတယ် ။ အစ်မကတော့ မိုးတွင်းဘက်ပေါက်တဲ့ မှိုလို ပေါသည့်မင်းလောင်း ရွှေထီးဆောင်းပဲ တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ်မှန်း အရသာရှိရှိဖတ်ရလို့း)
((((ကြိုက်သူတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ကြားထဲမှာ သူ့ နှလုံးသားက ဘယ်သူ့ ကိုမှ ချစ်လို့ မရလို့အပျိုကြီးလုပ်နေခဲ့တာတဲ့...))))
ရတာမလို လိုတာမရ လို့ပဲဖြစ်မှာပါ...
ရွေးချယ်ခြင်း မှ စာလုံးပေါင်း အမှန်...
ခြယ် = အရောင်ခြယ်
ရုံးမှာတည်းက ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်။
အထင်ကြီးခြင်းက စ, မစ တော့ မသေချာပေမယ့် အထင်မကြီးနိုင်တဲ့လူကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုကြီး ဝင်လာဖို့ ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်မိဘူး။
မှန်တာ ဝန်ခံရရင် အချစ်ဆိုတာလဲ နှိုင်းရတရားလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ အချက်အလက်မတွက်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုသက်သက်ဆိုတာ ရှိရင်တောင်မှ appreciate လုပ်ဖို့ ခဲယဉ်းမိနိုင်တယ်။
personal အမြင် သက်သက်ပါ။
အသစ် ဆိုလို့ ပြေးလာဖတ်တာ.. စိတ်ဝင်စားစရာ ပို့စ်လေး ဖြစ်နေတယ်။
အချစ် နဲ့ ရွေးချယ်မူ...
တချို့လည်း ထပ်တူကျ ကြ..
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..ဘ၀ ဆိုတာ မျိုး က.. ရှည်လျား လှ တာ မဟုတ်လေ တော့.. ကံတရားတွေ က လည်း.. လက်ချောင်း တွေ လို အတိုအရှည် မညီ ကြတော့...
( အဲ..ဆက်မပြော တတ်တော့ဘူး...)း)
ကျမ ကတော့..ကလေး တွေ နဲ့ ဆပ်ပြာပူစီဗောင်းလေး တွေ သာ မြင်ယောင်မိ...း)
ဘာပြောရမှန်းမသိလို့ ပြောတော့ဘူး နော် ဟီးး :D
စာဖတ်သျှမ်းပုံရတယ်။ ကျနော့်မှတ်ချက်က... “လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေ လုပ်နေကြသူတွေထဲမှာ” လို့ အသေအချာ ရေးထားပါတယ်။ ဒီစကားဟာ “လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေ လုပ်နေကြသူတိုင်း” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အဓိပ္ပါယ်မတူကွာခြားတယ်ဆိုတာ နားလည်စေချင်ပါတယ်။
ကိုဖြိုးပြောသလို အိမ်ထောင်သည်တွေထဲမှာလည်း လိင်တူချင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာမှ အဆန်းတကြယ်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ နှိမ့်ချတာမဟုတ်သလို နစ်နာအောင်ပြောတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း မရောက်ပါ။ “အပူမရှာချင်လို့ အပျိုကြီး လုပ်နေတယ်” လို့ တစုံတယောက်က ပြောလာတိုင်း တကယ့်နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းမှန်က အဲသည်လို ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကို ထောက်ပြခြင်းမျှသာ။
ကိုဖြိုးအနေနဲ့ ဘယ်စာကိုမဆို အဓိပ္ပါယ်ပေါက်အောင် ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်လွဲခဲ့ရင် စကားနည်းနည်းပြောလည်း ပြောသမျှမှာ အမှားပါနေမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။
Heart or love or feeling is controlled by brain. So, if you areabrain person oraheart person, actually your brain is telling you to have those feeling. Whatever you do, your brain is responsible for that. On the otherhand you are born with that kind of mindset. It's just your destiny. Like May Nyein, I belong to the group which believes in karma.
အမြင်ချင်းက တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီရှိကြမှာပါဘဲ... အချစ်မပါတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုတော့ အားမပေးချင်ပါဘူး... ဦးနှောက်နဲ့လက်ခံနိုင်သူကို ချစ်မိရင် အကောင်းဆုံးပေါ့နော်
အချစ်ဆိုတာ အထင်ကြီးမှူ့က စနိုင်သလို သနားမှူက ဆိုတာကလည်း စတတ်တာပဲ ။ နောက် ပြီး accidental အထိအတွေ့ တစ်ခုကလည်း စနိုင်တာပါပဲ ။ ဘာမှမဟုတ်ပဲ နေတာ ကြာလာလို့ ပိုပို ခိုင်မြဲလာတဲ့ သံယောဇဉ် တစ်ခုကို အချစ်လို့ ထင်မှတ်သူလည်း ရှိမယ် ။ ကြိုက်နှစ်သက်မှူ့ တစ်ခုခုကြောင့် အချစ်လို့ ထင်မှတ်ကြတာလည်း ရှိမယ် . . . ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ တော်တော် များတဲ့ အရာတွေကို အခြေခံနိုင်တာပါပဲ။ နောက်ပြီး တစုံတစ်ခုသော လိုချင်တဲ့ လောဘကြောင့် အချစ်လို့ တံဆိပ်ကပ် ပြီး အချစ်ဆိုတာကို တလွဲသုံးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတာပါပဲ ...
ဒီတော့ အချစ်ဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါလို့ သတ်မှတ်တာကိုပဲ လက်ခုပ်တီး အားပေးချင်ပါတယ် ။ ရွေးချယ်မှူ့မှာ အချစ်ဆိုတာ ပါသော် ပို၍ ကောင်၏ ပေါ့ ။ မပါတော့လည်း နဲနဲ ပေါ့ရွတ်ရွတ်နေရုံမှ တပါး သိပ်တော့ မထူးခြားလှပါ ။
ကျနော့် အမြင်အရတော့ ကိုယ်ရွေးချယ်မဲ့ တခြားတပါးသော သူကို လေးစားနိုင်မှု့ ၊ သံယောဇဉ် ထားနိုင်မှူ့ ၊ တချို့ချို့သော မိမိ မနှစ်သက်တဲ့ အမူအကျင့် တို့ကို ဥပေက္ခာ ထားနိုင်မှူ့တို့ ရှိရင် ရွေးချယ် သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံး အရာကတော့ ရွေးချယ်ပြိးလို့ ဘ၀ နှစ်ခုက နေ တစ်ခုထည်း ဖြစ်လာတဲ့ အခါ "ငါတို့" ဆိုတဲ့ အတွေးကို အမြဲထားနိုင်ပြီး သစ္စာ ရှိဖို့ပါပဲ ။
Most of Myanmar girls/ women don't know how to findaGuy for their life, They juz get nearest one available around them asaMate partner...it's juz Third world Country Girls/Women Habbit...
Try to fina A guy as Valuable, Intelligent, Nice , Funny, Good character, Habbits, attitude, educated and background etc...
Don't be Hurry, If U'r Valuable Girls/Women, They'll COME to U...Finallly...
တန်ခူးရေ...စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ...အစ်မမေငြိမ်းပြောသလို ကံဆိုတာလည်း ပါဦးမယ်ထင်တယ်..အချစ်တခုတည်းနဲ့ မပြီးသလို ဦးနှောက်တခုတည်းနဲ့လည်း ပြည့်စုံမယ်လို့တော့ မထင်မိဘူး။ ဒါကလည်း ခုလိုအချိန်မျိုးမှ ပြောဖြစ်တာပေါ့...:)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ..လောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တာ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာတခုအတွက် အနည်းဆုံးတခုခုတော့ပေးဆပ်ခဲ့ရမှာပဲပေါ့လေ..အဲဒီအတွက် ထိုက်တန်တယ်လို့ ယူဆရင်တော့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုအပေါ် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နိုင်မယ်လို့ ထင်မိတာပဲ တန်ခူးရေ...